८ फाल्गुन २०७४ मंगलबार Tuesday, February 20, 2018
सरकारले नामिवियामा सम्पन्न आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग प्रतियोगिताका खेलाडी र प्रशिक्षकलाई ३/३ लाख दिने घोषणा गरेको छ ।
कान्तिपुर कुनै निजी कम्पनी मात्रै नरहेर राष्ट्रिय संस्था सरह भएको र जनताको साझा सम्पत्ती भएको कान्तिपुर मिडिया गु्रप (केएमजी)का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले बताएका छन् । कान्तिपुरको २५ औं रजत बार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सिरोहियाले यस्तो बताएका हुन् ।
जन्ममिति विवादमा आएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पाँचौं जन्ममिति खुलेको छ । चितवनको शारदानगरस्थित श्री शारदा माविबाट लिएको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (ट्रान्सफर सर्टिफिकेट) को विवरणअनुसार उनको जन्ममिति २००९ साल चैत १५ गते देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा फरकफरक जन्ममिति भेटिएपछि उत्पन्न विवाद अझै निरुपण हुन सकेको छैन ।
पूर्वी रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिका-४ नम्जामा सोमबार ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा परी १२ वर्षका बालकको पनि ज्यान गएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता टुंगो लगाउने तयारी भएको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ ।
कार्यसम्पादन मूल्याकंन किर्ते सम्बन्धी मुद्धामा प्रहरीले व्यापक खोजी गरिरहेका पूर्व डिआईजी एवं एमाले सांसद नवराज सिलवाल केपी प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सार्वजनिक स्थानमा देखिएका छन् । सिलवाल सोमबार साँझ एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँग प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटन बालुवाटार पुगेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारमाथि आर्थिक शोषण गरेको प्रमाण हुँदा पनि एसआरएस म्यानपावरमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आनकानी गरेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन/नियमावली अनुसार अब कारबाही गर्नासाथ एसआरएस म्यानपावरको इजाजत (लाइसेन्स) नै खारेज हुने अवस्था छ ।
हाम्रो नेपालनेपालको मनोरम हिमश्रृंखला अवलोकनको भाग्यशाली अवसर
हाम्रो नेपालकान्तिपुर पब्लिकेसन्सको २५ औं वार्षिकोत्सवको शुभ उपलक्ष्यमा प्रस्तुत प्रश्नहरुको सही उत्तर दिई नेपालका अदभूत हिमश्रृंखलाहरु अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुहोस् ।
शृंखला १ फागुन ७-८
शृंखला २ फागुन ९-१०
शृंखला ३ फागुन ११-१२
शृंखला ४ फागुन १३-१४
शृंखला ५ फागुन १५-१६
शृंखला १: चाडपर्व [फागुन ७ - ८]
तस्बिरमा देखाइएका चाडपर्वको नाम के हो ?
सेतो मछिन्द्रनाथ जात्रा
रातो मछिन्द्रनाथ जात्रा
तमु ल्होसार पर्ब
शृंखला २: तालयस शृंखलामा फागुन ९ - १० मा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ ।
शृंखला ३: हिमालयस शृंखलामा फागुन ११ - १२ मा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ ।
शृंखला ४: व्यक्तित्वयस शृंखलामा फागुन १३ - १४ मा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ ।
शृंखला ५: स्थानयस शृंखलामा फागुन १५ - १६ मा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ ।
* शर्तहरु लागु हुनेछ्न्
मिचेर बनाइएका संरचना भत्काइँदै
इटहरी– सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना इटहरी उपमहानगरले शुक्रबारबाट भत्काउन थालेको छ । उपमहानगर ४ र ५ मा खेती खोला मिचेर निर्माण गरिएको ३ सय मिटर रिटेनिङ वाल नगरपालिकाले भत्काएको छ ।
स्थानीय तहको बजेट सडकमा
खोटाङ– स्थानीय तहले जिल्लामा सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । जिल्ला अधिकांश गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा सडक निर्माण र सुधार रहेको छ । विकास र आर्थिक स्तरको पहिलो सर्त सडक भएको जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व माग
मोरङ– कांग्रेसका भ्रातृ संगठन नेविसंघको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षणका सहभागी विद्यार्थी नेताहरूले पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको माग गरेका छन् । अहिलेको नेतृत्वले पार्टीको जिम्मेवारी उचित रूपमा बहन गर्न नसकेकाले नयाँ नेतृत्व आवश्यक भएको प्रशिक्षणका सहभागीहरूको ठहर रहेको विद्यार्थी नेता ललित श्रेष्ठले बताए ।
पोस्टमार्टम र एक्सरे सुरु
दमक अस्पतालले शनिबारदेखि पोस्टमार्टम र भिडियो एक्सरे सेवा सुरु गरेको छ । जिल्ला अस्पतालको मान्यता पाएको करिब दुई वर्षमा अस्पतालले नि:शुल्क पोस्टमार्टम सेवा सुरु गरेको हो ।
मोरङमा ९ सय ३८ बिरामी
जिल्लामा हात्तीपाइलेका ९ सय ३८ बिरामी रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङले जनाएको छ । खुट्टा सुनिएको २ सय ६, हाइड्रोसिल भएको ७ सय ८ र हात, स्तनलगायत शरीरको अन्य भागमा हात्तीपाइले रोग लागेका २४ रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख चन्द्रदेव मेहताले बताए ।
‘जोगबनी किमाथाङका नाका चाँड’ै
विराटनगर– प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जोगबनी रानी मार्गलाई चिनको किमाथाङका नाकामा जोडेर प्रदेशलाई ४ मुलुकको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने बताएका छन् ।
सप्तरी जिल्लाबाट विभिन्न समयमा किर्ते नागरिकता बनाएको आरोप लागेकाहरू अदालतको आदेशमा धमाधम छुट्न थालेका छन् । किर्ते नागरिकता लिनेहरू मात्र होइन्, बनाउने कार्यमा लाग्ने पेसेवर गिरोहका सदस्यहरूले पनि ‘अनुसन्धान अभाव’ को नाममा उन्मुक्ति पाएका हुन् ।
सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, सगरमाथा अञ्चलको व्यापारिक केन्द्रसमेत रहेको लहान नगरपालिकाका एक वडाध्यक्ष चौतारामा बसेर कार्यालयको काम गर्न बाध्य छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्तामा झा
प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आइतबार अधिवक्ता दीपेन्द्र झालाई प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका छन् ।
‘बदली’ ले सजिलो
अन्नसँग दैनिक उपभोग्य बस्तु साटेर गर्जो टार्ने ‘बदली’ परम्पराले ग्रामीण भेगका उपभोक्तालाई सजिलो भएको छ । हेर्दा सामान्यजस्तो लागे पनि ग्रामीण भेगमा अझै पनि अन्नपातबाट दैनिक उपभोग्य बस्तु साट्ने यो परम्पराले ग्रामीण भेगका आवश्यक सामान खरिद गर्न सहज बनाएको छ ।स्थानीयले धान, गहुँ, मकै आदिसँग आफूलाई चाहिएको बस्तु साटछन् ।
चन्द्रपुर नगरपालिका ३ गैंडाटारकी नन्दमाया दाहाल आइतबार खेतमा हरियो मकैका बोट काट्न व्यस्त थिइन् । मकैमा दाना नलागेपछि उनले मकैका बोटै काटेकी हुन् । मकैका घोगा ठूलो भए पनि कुनैमा दाना लागेको छैन ।
मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाब राउत प्रदेश २ का सुरक्षा प्रमुखहरूलाई जनमुखी सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले भने राजधानी सर्दैन, ढुक्क हुनुस्
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गृह जिल्ला मकनापुरवासीलाई प्रदेशको राजधानी नसर्ने भन्दै ‘ढुक्क हुन’ आग्रह गरेका छन् ।
ग्रमीण भेगककी एक १४ वर्षीया बालिकालाई भूकम्पपछि भत्किएको घर बनाउने काम गर्न आएका बर्दियाका एक चौधरी थरका युवकले लिएर बेपत्ता भए ।
बाजा संरक्षणमा जुट्दै नेवार समुदायका युवा
नेवारी समुदायको परम्परागत धिमे बाजाको संरक्षणमा मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने पालुङका युवाहरू जुटेका छन् ।
आलुखेतीले फेरिँदै जीवनस्तर
झन्डै दुई दशकअघि यहाँका कृषक गहुँ, तोरी र मकै खेतीमा सीमित थिए । अहिले यहाँका किसानको जीवनस्तर माथि उठेको छ ।
सुधारिएन धरहरा क्षेत्र
धरहरा क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको पनि १३ वर्ष नाघ्यो । महानगरले साइड वाकर्स प्रालिलाई बीस वर्षका लागि जिम्मा दिएको थियो । यत्रो समय बित्दा पनि साइड वाकर्सले गर्नुपर्ने सर्त पालना गरेन ।
राजमार्गमा हुने दुर्घटनाले चर्चा धेरै पाउने गर्छ । तर चितवनमा संख्याका हिसाबले हेर्ने हो भने गाडी दुर्घटना राजमार्गमा भन्दा भित्री सडकमा धेरै हुने गरेको छ । चितवन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दिएको विवरणअनुसार गएको माघ महिनामा जिल्लाभरि २६ वटा गाडी दुर्घटना भए जसमध्ये भित्री सडकमा १२ वटा दुर्घटना भएको छ ।
जिप दुर्घटनामा महिलाको मृत्यु
यहाँको वालिङ नगरपालिका–६ आमडाली स्थित भित्री सडक खण्डमा सोमबार साँझ भएको सडक दुर्घटनामा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।
एउटै नदीमा ७ जलविद्युत् आयोजना
कास्की र पर्वतको सीमा हुँदै बगेको मोदी खोलामा ७ वटा जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएका छन् । छोटो दूरीको खोलामा यति धेरै जलविद्युत् आयोजना बन्न लागेको सम्भवत नेपालमै पहिलो हो । हालसम्म मोदीमा २ आयोजना निर्माण भइसकेका छन् ।
विद्युत् अभावले पुँजी पलायन
जिल्लाकै दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्रमा अहिलेसम्म विद्युत् सेवा नपुगेको सुन्दा अनौठो लाग्नसक्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको १० व्यवस्थित सहरमध्येको एक बुर्तिबाङमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् नपुगेको हो ।
मनाङमा पुगेनन् पाठ्यपुस्तक
आश गुरुङ, विना थापा
हिमाली जिल्ला मनाङमा फागुन लागेसँगै शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ । तल्लो भेगका नासोङ र चामे गाउँपालिकाका स्कुलमा पढाइसमेत सुरु भइसकेको छ । पाठ्युपस्तक भने अझै पुगेका छैनन् ।
समयमा पुग्दैनन् नगरबस
कास्की– पोखरा–लेखनाथ महानगरका विभिन्न रुटमा चल्ने नगर बस समयमै गन्तव्यमा नपुग्दा यात्रुहरूले सास्ती पाएका छन् । बस चोक–चोकमा आफूखुसी रोकिने गरेको छ ।
भूपू भारतीय सैनिकका परिवारलाई नि:शुल्क उपचार
बागलुङ– भारतीय सेनाले सबै भूतपूर्व सैनिक र उनीहरूका परिवारको नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने भएको छ ।
दशगजाको तारबार कमसल
नेपाल–भारत छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा निर्माण गरिएको विद्युतीय तारबारका पोल ढल्न थालेका छन् । पोल र तार दुवै कमसल भएकाले सयभन्दा बढी पोल ढलेको स्थानीयले बताए ।
स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा उपकरणमा खिया
पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको अप्रेसन कक्ष आधुनिक र सुविधा सम्पन्न छ । आवश्यक उपकरणसमेत पर्याप्त छन् । तर, ती उपकरण प्रयोगमा नआउँदा खिया लाग्ने र बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन् । दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र अन्य कर्मचारी अभावले नियमित शल्यक्रिया सेवा रोकिएको छ ।
१५ दिने विश्व शान्ति पूजा
बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा १५ दिने विश्व शान्ति पूजा सुरु भएको छ । चारैतिर अशान्ति बढिरहेका बेला सबै प्राणीको जीवनमा सुख र शान्ति ल्याउने उद्देश्यले ड्रिगुङू काग्युद् फाउण्डेसनद्वारा द ग्रेट लोटस स्तुपमा आइतबारबाट पुजा थालिएको हो ।
चेपाङ्गीलाई नगरपालिका पुग्न ५० किमि
नगरपालिका कार्यालय पुग्नै चेपाङका सेवाग्राहीलाई ५० किलोमिटर पार गर्नुपर्छ । यहाँका सर्वसाधारणलाई सदरमुकाम गुलरिया पुग्न अझ धेरै टाढा छ ।
‘स्थानीय तह सञ्चालनमा स्पष्ट कानुन र इच्छाशक्ति अभाव’
स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको ७ महिना बितिसक्यो । लामो समय बित्दासम्म सोचेअनुरूप काम हुन सकेको छैन । पाल्पावासी जनप्रतिनिधि पाएसँगै आगामी दिनमा विकासले गति लिनेमा आशावादी थिए । तर आशातित काम हुन सकेको छैन ।
स्वर्गद्वारीमा धार्मिक पर्यटक बढे
प्रदेश ५ कै पवित्र तीर्थस्थल स्वर्गद्वारी मन्दिरको दर्शन गर्न आउनेको भीडले स्वर्गद्वारी आश्रम भरिभराउ भएको छ । यात्री बढेसँगै यहाँको पाहुना आवासगृहमा बसाल्ने समस्या थपिएको छ ।
मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भएको चार दिनपछि प्रदेश ६ को मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका ६ सांसदले आइतबार प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।
परिवर्तन ल्याउँदै लोकमार्ग
मुसिकोट नगरपालिका–८, का वडासदस्य लसुनबारीका लोकबहादुर बुढाले चार वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । त्यसअघि आफ्नै भान्साका लागि मात्र तरकारी खेती गर्ने गरेका उनी घर नजिकै मध्यपहाडी लोकमार्ग सञ्चालनमा आएपछि व्यावसायिक बनेका हुन् ।
आलोपालो गर्छन् वडा सचिव
यहाँको कुशे गाउँपालिका एक जना वडा सचिवको भरमा छ । कुशेमा कार्यरत एक्ला वडा सचिव सत्यदेव खनालले आलोपालो गरेर ९ वटै वडामा सेवा दिँदै आएका छन् । सचिव खनालले १ वडाका लागि १ साताको कार्यतालिका बनाएर ९ वडामा पालैपालो सेवा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।
‘प्रदेश सहिद’ का तस्बिर राख्न माग
प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशसभा हल तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सहिदका तस्बिर राख्न माग गरिएको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभाको तेस्रो बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मीले प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका चार सहिदको तस्बिर राख्न माग गरे ।
पुतली दरबारको पुनर्निर्माण भएन
त्रिवेणी गाउँपालिका ४ फलाबाङ, रावतगाउँस्थित पुतली दरबार भत्किएको छ । दरबार भत्किए पनि पुनर्निर्माणमा कसैको चासो देखिएको छैन । ऐतिहासिक महत्त्वको दरबार पुनर्निर्माण भए आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्ने स्थानीयले बताएका छन् ।
५ करोड लगानीमा सुविधायुक्त होटल
सदरमुकामको चहलपहल स्थानीय तहमा सर्दै गएका बेला धेरैजसो व्यापारी तथा होटल व्यवसायीसमेत स्थानीय तहका केन्द्रतिरै सर्ने सुरसारमा छन् । तर एकजना युवा व्यवसायीले भने बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा करिब ५ करोड लगानीमा भव्य होटल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
महोत्सवमा महिलाको आकर्षण
साँफेबगरमा चार दिनदेखि सञ्चालित प्रथम अछाम महोत्सवमा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू आकर्षित देखिएका छन् । महोत्सव हेर्न टाढा–टाढाबाट किशोरी उमेर समूहका देखि लठ्ठी टेक्ने उमेरका वृद्धाहरूको उपस्थिति बाक्लो रहने गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक: ३ आयोजना प्राथमिकतामा
प्रदेश ७ को मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका ३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथै पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आइतबार बिहान पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
कञ्चनपुरको मौरीफाटामा स्कुले किशोरी बलात्कृत भएकै दिन बिहीबार बुढीगंगा नगरपालिका घर भएकी १६ वर्षीया किशोरीलाई स्थानीय दुई युवाले बलात्कार गरेका छन् ।
एमाले र माओवादीबीच ७ बुँदे सहमति
बाम गठबन्धनका प्रमुख दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सात बुँदे सहमति भएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मध्यरातिसम्म भएको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकपछि एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सात बुँदे सहमति भएको हो ।
अवैध रुपमा घरेलु महिला कामदार कुवेतमा ल्याउने काम गर्दैै आएका गैरआवासीय नेपाली संघ कुवेतका अध्यक्ष अर्जुन तामाङले नेपाल पत्रकार महासंघ कुवेतका अध्यक्ष हरिकृष्ण न्यौपानेमाथि आइतबार साँझ सांघातिक आक्रमण गरेका छन् ।
हेटौंडामा जारी सुमन भोम्जन स्मृति फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार त्रिभुवन आर्मी क्लबले सुदूरपश्चिम ११ फुटबल क्लबको सामना गर्दैछ ।
हवाई क्षेत्रमा स्थापित हुन खोजिरहेको श्री एयरलाइन्स रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) को दोस्रो संस्करणमा एयरलाइन्स पार्टनरका रूपमा जोडिएको छ । डीपीएलको दोस्रो संस्करण चैत १७ बाट धनगढीमा सुरु हुनेछ ।
नेपालले जिम्बावेमा हुने विश्वकप छनोट क्रिकेटमा ललितनारायण राजवंशीलाई १५ सदस्यीय टोलीमा समावेश गरेको छ । विश्वकप छनोटका लागि घोषित १५ सदस्यीय नेपाली टोलीको नाम आइतबार विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था आईसीसीले सार्वजनिक गरेको छ ।
रुसमा हुने विश्वकप फुटबल सुरु हुन साढे तीन महिना बाँकी हुँदा कोका–कोला नेपालले खेलको महाकुम्भलाई लिएर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रवद्र्धन कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ । त्यसअनुुसार ४० नेपाली समर्थक विश्वकपका खेल हेर्न रुस जाने छन् । ती भाग्यमानीहरूले सम्भवत: लियोनल मेसीसम्मिलित अर्जेन्टिनाको खेल हेर्न पाउने छन् ।
७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजना आइतबारबाट मर्मत थालिएको छ । मर्मतका क्रममा एकसाता सम्म विद्युत उत्पादन बन्द गरिने भएको छ ।
जमाना स्मार्ट फोन, टयाब र विभिन्न ग्याजेटहरूको छ । जसको हातमा ठूलो स्मार्ट फोन हुन्छ, उसको स्तर बढेको अनुभव गर्नेहरू थुप्रै छन् । ‘कर्णाली ब्लुज’ र ‘फिरफिरे’ उपन्यास लेखेर लाइमलाइटमा आएका बुद्धिसागरले भने पाँच महिनादेखि स्मार्ट फोन थन्क्याएका छन् । उनी अहिले स्मार्ट फोन छोडेर सामान्य मोबाइल चलाउँछन् ।
भारतका केन्द्रीय मन्त्रीसमेत रहेका गायक बाबुल सुप्रियोले पाकिस्तानी कलाकारलाई बलिउडमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने बताएका छन् । पाकिस्तानी नागरिकता हुनु नै उनीहरूको एक मात्र अपराध भएको बाबुलको भनाइ छ । उनले वरिष्ठ गायक राहत फतेह अली खानका गीत ब्यान्ड गरिनुपर्छ भनेका छन् ।
आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भुजेल समुदायको संस्कृति फिल्ममा समेटिने भएको छ । भुजेल समाज सेवा समितिको सक्रियतामा ‘नि–प्हुँगाल’ (हामी भुजेल) बन्ने भएको हो ।
नायिका प्रियंका कार्की अभिनित नयाँ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘सपनीमा आउनेलाई’ गीतमा प्रियंका कार्की ६० जना कोरसको बीचमा देखिएकी छन् ।
अभिनेत्री श्वेता खड्का आफ्नै लगानी रहेको फिल्म ‘कान्छी’बाट उत्साहित छिन् । शुक्रबारबाट मुलुकभर प्रदर्शनमा आएको फिल्मले ‘राम्रो दर्शक प्रतिक्रिया पाइरहेको’ उनले दाबी गरिन् । ‘शनिबार धेरैजसो हलहरू हाउसफुल थियो,’ उनले भनिन्, ‘दर्शकले फिल्म मन पराइदिनुभएकोमा धेरै खुसी छु ।’
ठूलो परिमाणको लागूऔषधसहित सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२ बाट आइतबार तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
तपाईंको सुन्दर अनुहारमा यदी कालो या खैरो दाग छ भने यसले तपाईंको आत्मविश्वासलाई पनि प्राभावित पार्छ । आखाँको वरिपरि या अनुहारमा चायापोतो फुस्रो दाग देखिन्छ भने तपाईंको सौन्दर्यलाई यसले प्रभावित पार्दछ।
जीवनशैलीमा सामान्य सकारात्मक सुधार गरेर हाम्रो मुलुकमा बर्सेनि करिब २१ हजार व्यक्तिलाई क्यान्सर हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। हाल वर्ष दिनमा करिब ३५ हजार नयाँ क्यान्सर रोगी देखिने गर्छन्।
हाम्रो मुलुकमा एक दशकदेखि तल्लो मलद्वारको रोगको उपचार आयुर्वेदको क्षारसूत्र चिकित्सा पद्घतिद्वारा पुन: नबल्झिने गरी सफलतापूर्वक भइरहेको छ । यस्तो उपचार लिनेहरूमा २०–८० वर्षका छन् । बालबालिकाहरूसमेत यो उपचारका लागि पुगिरहेका छन् ।
सन् २०१७ मा अंगभंग भएपछिको अवस्थामा करिब ८७ जना नयाँ कुष्ठरोगीले उपचार सेवा लिए। ४ सय १५ जना १४ वर्षमुनिका बालबालिकामा समेत कुष्ठ भेटियो।
नेपालीको राष्ट्रियता नेपाली हो भन्नेमा दुईमत भएन । राष्ट्रियता उल्लेख गर्नुपर्ने फाराम भर्दा राष्ट्रभाषा ‘नेपाली’ उल्लेख गर्ने गरिन्छ, भलै रोमन लिपिमा किन नहोस् । नेपाली हुनुको गर्व होस् या नहोस् लेखिटोपल्ने हो ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले इरानको कडा शब्दमा आलोचना गर्दै ‘विश्वकै लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा’ भएको बताएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा भएको भनिएको रुसी हस्तक्षेपका विषयमा अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्युरो, एफबिआइले गरेको अनुसन्धान एकपक्षीय भएको बताएका छन् ।
इरानको राजधानी तेहेरानबाट यासुजका लागि उडेको एक यात्रुवाहक विमान इस्फान प्रान्तको सेमीरोममा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ‘राजनीतिक सिद्धान्त र विचारधारा’ का आधारमा ब्रेक्जिटपछिको शान्तिसुरक्षाका व्यवस्था प्रभावित भए सर्वसाधारण पीडित हुने भन्दै युरोपेली नेतालाई चेतावनी दिएकी छन् ।
पाकिस्तानी प्रतिआतंकवाद अदालतले ७ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै २४ वर्षीया युवकलाई शुक्रबार फाँसीको सजाय सुनाएको छ ।
निरंकुश राणाशासनको अन्त्य र समाजमा समानता सृजना गर्न कैयौं वीर योद्धाहरूले जीवनको आहुति दिए । ती योद्धाहरूलाई ‘सहिद’ का रूपमा अहिले पनि हामी सम्मान गर्छाैं । १९३० को दशकमा भोजपुरको नेपालेडाँडा, सिम्ले गाउँमा जन्मिएकी योगमायाले निरंकुश राणाशासनको विरोध मात्र गरिनन्, अशिक्षित नेपाली समाजलाई संगठित गरी मर्न र मार्नसमेत तयार पारिन् ।
वैज्ञानिकहरु धेरै पहिलेदेखि ‘प्रोस्थेटिक्स’ र रोबोटहरुका लागि ईलेक्ट्रोनिक स्किन (विद्युतीय छाला) को निर्माणको सपना देख्दै आएका थिए ।
शोधकर्ताहरुको एक टोलीले एउटा यस्तो थ्रीडी (३–डी) प्रिन्टिङ प्रविधिको खोजी गरेका छन् जसको सहयोगबाट मानव शरीरको नक्कली अंगहरु बनाउन सकिन्छ । ति अंगहरुको माध्यमबाट वैज्ञानिकहरुले खराब भई सकेका शरीरका तन्तुहरुलाई फेरी दुरुस्त बनाउन सक्नेछन् ।
गुगलले एउटा स्मार्ट क्यामेरा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त क्यामेरा स्वचालित छ । कुन बेला तपाईको तस्बिर खिच्नु पर्छ भन्ने कुरो उसलाई पहिलेदेखि थाहा हुन्छ ।
कुनै पनि व्यक्ति सबैभन्दा बढी मृत्युबाट डराउाछ । त्यसैले चिकित्सकहरुले गम्भिर प्रकृतिको रोगबारे तत्कालै विरामीलाई जानकारी दिनुको साटो आफन्तलाई दिने गरेको पाइन्छ । विरामीले ‘अब आफ्नो आयु सकिएको’ थाहा पाएपछि अत्तालिने अनि ऊमाथि मनोवैज्ञानिक डर सिर्जना हुने भएकाले चिकित्सकहरुले यो उपाय अबलम्बन गरेको हुनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रमा उदाइरहेको सोसल कमर्श प्लेटफर्म ‘सगुन’को वहुप्रतिक्षित मोबाइल एप हालै सार्वजनिक भयो । एन्ड्रोइड भर्जनमा उपलब्ध सगुन एप बलिउड नायिका श्रद्धा कपुरले शुभारम्भ गरेकी हुन् । उनलाई अर्की सेलिब्रेटी तथा टिभी पर्सनालिटी मन्दिरा बेदीले साथ दिएकी थिइन् ।
कान्तिपुर रजत यात्रा : खाडी रोजाइ
एउटा पत्रकारका रूपमा कतार उत्रिएपछि मात्रै, धेरै कुरा गुम्सिएर रहेको अवस्थामा र पोखिएर बहन नपाएको यथास्थितिमा शब्दकोशमा पनि ‘खाडी’ शब्दको प्रयोग भएको हो कि झैं मैले ठानें । कान्तिपुर कतार संस्करणले यही कुराको सबैभन्दा बढी ‘उत्खनन’ गर्‍यो ।
सगरमाथा हिमश्रृखला आँखै अगाडि हेर्ने रहर कसलाई नहोला ? त्यसका लागि कालापत्थर पुग्नुपर्छ भन्ने छैन । कालापत्थर सबैको पहुँचको गन्तब्य पनि हैन । सगरमाथालाई सिधा हेर्न सकिने ‘पिके लेक’ पनि उति सहज छैन । सबैभन्दा सहज गन्तब्य पत्ताले आसपास हो ।
तामाङ समुदायले सोनाम ल्होछार (नयाँ बर्ष) राजधानीको तीनकुनेस्थित चौरमा मनाइरहेका छन् ।ल्होछारको अवसरमा काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने तामाङहरु तीनकुनेमा भेला भएर मनाइरहेका हुन् । यसअघि उनीहरु शहरका बिभिन्न भागबाट झाँकीसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बिहीबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । सपथका क्रममा ईश्वर शब्द भने उनले उच्चारण गरेनन् । राष्ट्रपतिले ईश्वर शब्द उच्चारण गरेका बेला ओलीले भने, 'भनि सकें ।'
नेपाली सेना दिवसका अवसरमा मंगलबार साँझ सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा बढाइँ तथा आतिशबाजी प्रदर्शन गरिएको छ । नेपाली सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शिवरात्रि तथा सेना दिवसका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित बढाइँ तथा सैनिक कला प्रदर्शनीमा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी भइन् । उक्त अवसरमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, मन्त्रीगण, प्रधानसेनापति राजेन्द्र छत्री, सरकारका उच्च पदाधिकारी, उच्च सैनिक अधिकारीलगायत उपस्थित थिए ।
सात सालले झोसेको परिवर्तनको आगो
हामी २०४६ र २०६२/६३ मा भएका संघर्षलाई आन्दोलन भन्छौं । तर सात सालको संघर्षलाई क्रान्ति भन्छौं । किन ? हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा सात सालको परिवर्तनको के महत्त्व छ ?
युरोपेली फुटबल सिजनको ‘दोस्रो हाफ’ चलिरहेको छ । उपाधि होड अन्त्यतिर आउन लागेको छ । अब प्रिमियर लिग (इंग्ल्यान्ड) मा ११, ला लिगा (स्पेन) मा १५, बुन्डेस लिगा ...
मुना गुरुङ र इन्द्रा गुरुङ लमजुङको त्रिभुवन विद्याश्रममा कक्षा ६ मा पढ्छन् । क्व्होलासोंथर गाउँपालिका–४, भुजुङका यी दुई भर्खर १२ वर्षका भए । दुवैलाई नाचगानमा औधि रुचि छ । ...